ဂါဇီး LLC လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ဂါဇီး LLC / လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ
တစ်ဦးကဂါဇီးလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ကန်ထရိုက်ဝင်, ငွေချေးသို့မဟုတ်ချေး, ဂုဏ်သတ္တိများပိုင်ဆိုင်နိုင်သည့်သီးခြားဥပဒေရေးရာ entity ဖြစ်ပြီး, file ကိုတရားစွဲမှုနှင့်ဥပဒေတစ်ခုတရားရုံးတွင်တရားစွဲခံရမည်။ နိုင်ငံခြားသားရှယ်ယာအားလုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
2008 ၏ဂါဇီးကုမ္ပဏီများဥပဒေဟာသူတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း, လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဖျက်သိမ်းမှုအတွက် LLC ရဲ့အုပ်ချုပ်။
တစ်ဦးကဂါဇီးလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ဤအကြိုးခံစားခှငျ့ရှိသညျနိုင်သည်
• နိုင်ငံခြားရေးပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဖြည့်: နိုင်ငံခြားသားရှယ်ယာ 100% ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
• အဘယ်သူမျှမအခွန်ကောက်ခံမှု: ဂါဇီးက၎င်း၏ကုမ္ပဏီများအပေါ်မည်သည့်အခွန်စည်းကြပ်မထားဘူး။ သို့သော်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေအခွန်ကောက်ခံမှုမှဘာသာရပ်အမေရိကန်အခွန်ထမ်းနှင့်အခြားသူများကိုသူတို့အစိုးရတွေကအားလုံးကိုဝင်ငွေထုတ်ဖော်ရပေမည်။
• ကန့်သတ်တာဝန်ဝတ္တရား: ရှယ်ယာရှင်များ '' တာဝန်ယူမှုကိုသူတို့၏အခပေးရှယ်ယာမြို့တော်အလှူငွေဖို့ကန့်သတ်သည်။
• အစာရှောင်ခြင်းထဲဆွဲသွင်းပါဝင်: ဒါဟာထဲဆွဲသွင်းပါဝင်ဘို့တစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြာသာ။
• ဆန်ခါတင်ရှယ်ယာရှင်များမှာ: LLC သည်အကျိုးရှိသောပိုင်ရှင်များ '' privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဆန်ခါတင်ရှယ်ယာရှင်များကိုသုံးနိုင်သည်။
• အင်္ဂလိပ်: ဂါဇီးရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကသင်သည်ဘာသာစကား English ဖြစ်ပါတယ်။
ဂါဇီးလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) အမည်
LLC သည်ရှုပ်ထွေးမှုများဖြစ်ပေါ်စေရန်ဂါဇီးသို့မဟုတ်ဒါအလားတူအခြားဥပဒေရေးရာ entity အားဖြင့်အသုံးမထူးခြားတဲ့ကုမ္ပဏီအမည်ကိုရွေးချယ်ရမည်။ ကုမ္ပဏီအမည်များကိုတစ်ဦး CSP မှတဆင့် reserved နိုင်ပါသည်။
ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကိုကုမ္ပဏီများက "ကန့်သတ်" သို့မဟုတ် "လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရား" သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အတိုကောက် ", Ltd" နဲ့အဆုံးသတ်ရပေမည်။
တစ်ခုသာလိုင်စင်ရကော်ပိုရိတ် Service Provider (CSP) ဂါဇီးအတွက်ကုမ္ပဏီထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ file နိုင်ပါတယ်။ တရားဝင်လျှောက်လွှာနှင့်အတူပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းတစ်စာချွန်လွှာသတ်မှတ်တည်ထောင်အဖွဲ့ဝင်များကုမ္ပဏီထည့်သွင်းလိုသောဖျောတင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အသင်းကုမ္ပဏီ၏ဆောင်းပါးများကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်ကကျင်းပဘယ်လို ပတ်သက်. စည်းမျဉ်းများထွက် setting ။
ကုမ္ပဏီများ၏မှတ်ပုံတင်ကုမ္ပဏီအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ရည်ရွယ်ထားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားကိုအသိပေးရမည်ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများ၏အချို့အမျိုးအစားများကိုထိုကဲ့သို့သောဘဏ်လုပ်ငန်း, အုပ်ထိန်းသူ, အာမခံ, ဘဏ္ဍာရေးသို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံန်ဆောင်မှုအဖြစ်လိုင်စင်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းတဦးတည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေ့ကအများဆုံးကြာပေမယ့်တစ်ဦးအပိုဆောင်းကြေးများအတွက်သာ2နာရီကြာနိုင်ပါသည်။ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏တစ်ဦးကလက်မှတ်အတည်ပြုချက်ပေါ်မှာမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးနေပါတယ်။
ကုမ္ပဏီဖွင့်ခငျြးကအခါရှယ်ယာရှင်များ (liquidated) တာဝန်ယူမှုကန့်သတ်ထားရှိသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ရှယ်ယာရှင်များပုဂ္ဂိုလ်ရေးပိုင်ဆိုင်မှုများကို '' ကုမ္ပဏီရဲ့အကြွေးတွေကိုဦးတည် liabilities သာအဖွဲ့ဝင်များဆီသို့တိုးချဲ့မရှိဘဲကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏တန်ဖိုးတက်နေကြသည်။ သူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏မှထုတ်ပြန်ခဲ့သောအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့ရှယ်ယာဆိုမရတဲ့ဖြစ်ကြပါလျှင်သို့သျောလညျး, ထို့နောက်ကြောင်းပမာဏကိုကြွေးရှင်ရဲ့တောင်းဆိုမှုများမှဘာသာရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ တစ်ဦးရှယ်ယာရှင်အပြည့်အဝပေးဆောင်မဟုတ်ထုတ်ပေးရှယ်ယာများအတွက်ကုမ္ပဏီမှ $ 1,000 ကြွေးတင်နေသည်ဆိုပါကဥပမာအားဖြင့်, ထို $ 1,000 အကြွေးများကတောင်းဆိုမှုများမှဘာသာရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
•တည်ထောင်သူများ '' အပြည့်အဝအမည်များနှင့်ယူရှယ်ယာနှင့်လက်ရှိတန်ဖိုးကိုအရေအတွက်;
•ထ paid ရှယ်ယာစုစုပေါင်းပမာဏနှင့်မည်သည့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း paid ရှယ်ယာတည်ထောင်သူနှင့်အကြွေးပမာဏထုတ်ပေးခဲ့ကြသည်လျှင်,
အထူးသအစည်းအရုံးများ၏ဆောင်းပါးများအတွက်ဖယ်ထုတ်ထားမဟုတ်လျှင်ပညတ်တရားသည်ထွက်ထည့်သွင်းကုမ္ပဏီများအတွက်သတ်မှတ်ဆောင်းပါးများကိုသတ်မှတ်။ အစည်းအရုံးများ၏ဆောင်းပါးများတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားနည်းလမ်းကိုပြဋ္ဌာန်းမဟုတ်လျှင်တစ်ဦးကကုမ္ပဏီအထူး resolution ကိုအပေါ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်တစ်အများစုမဲနေဖြင့်မည်သည့်အချိန်က၎င်း၏ဆောင်းပါးများပြင်ဆင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
CSP ရဲ့အတော်များများအားလုံးစာရွက်စာတမ်းများလက်မှတ်ရေးထိုးရန်တစ်ကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ်လျာထားသောသုံးပြီးနှင့်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်မှတ်ပုံတင်သူတို့နှင့်အတူဖြည့်စွက်အကြံပြုပါသည်။ အဆိုပါမှတ်ပုံတင်အရာရှိများကခွင့်ပြုချက်အပျေါမှာ, အဆန်ခါတင်အစစ်အမှန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းပိုင်ရှင်များမှအစုရှယ်ယာလွှဲပြောင်း။ ဒါဟာမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူတင်သွင်းစာရွက်စာတမ်းများအတွက် privacy ကိုပေးပါသည်။
ယုံကြည်မှုအတွက်ကျင်းပရှယ်ယာ settlor ၏အမည်နှင့်လိပ်စာနှင့်အတူယုံကြည်မှုနှင့် truest ၏အမည်ကိုထုတ်ဖော်ရဦးမည်လိုအပ်သည်။
တဦးတည်းရှယ်ယာရှင်တစ်နိမ့်ဆုံးတစ်ဦး LLC ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
ရှယ်ယာမှတ်ပုံတင်ထားသောရှယ်ယာအဖြစ်ထုတ်ပေးရပါမည်နှင့်ရှယ်ယာလက်မှတ်များ၏ထုတ်ပေးရေး optional ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်လုလင်၏ရှယ်ယာပိတ်ပင်တားမြစ်သည်။ ဒဿမကိန်းရှယ်ယာခွင့်ပြုထားပါသည်။
ရှယ်ယာတစ်ခုထက် ပို. လူတန်းစားထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်လျှင်, ရှယ်ယာရှင်များအပေါ်တွင်သဘောတူရမည်ဖြစ်ပြီးကန့်သတ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ထိုသို့သောသဘောတူညီခကျြသာ5နှစ်ပေါင်းဦးရေအများဆုံးဘို့ခွင့်ပြုနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးကကုမ္ပဏီ Non-မဲပေးအစုရှယ်ယာများကိုထုတ်ပြန်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကုမ္ပဏီများ, ခွဲဝေဖို့အခွင့်အရေးများအတွက်ခြားနားချက်နှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောဝေစုအတန်းထုတ်ပြန်မဲပေးနှင့်ဖြန့်ဝေတက်အကွေ့အကောက်များသောနိုင်ပါတယ်။
အနည်းဆုံးဒါရိုက်တာတစ်ဦး LLC စီမံခန့်ခွဲခန့်အပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဒါရိုက်တာတစ်ဦးကသဘာဝလူတစ်ဦးသို့မဟုတ်တစ်ကော်ပိုရေးရှင်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အဘယ်သူအားမျှဒေသခံတစ်ဦးလိုင်စင်မှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်မလိုအပ်ပါလိမ့်မည်ထို့နောက်အဖြစ်ခန့်အပ်ခံရလျှင်ဒါရိုက်တာများ, ဒေသခံနေထိုင်သူများဖြစ်ကြောင်းလိုအပ်ချက်မဟုတ်ပါဘူးနေစဉ်။
ဒါရိုက်တာ indemnification ခွင့်ပြုစေခြင်းငှါနေစဉ်, သူတို့တစ်တွေညွှန်ကြားရေးမှူးကုမ္ပဏီနှင့် ပတ်သက်. ယုံကြည်မှုတာဝန်, default အနေနဲ့, ပေါ့ဆမှု, သို့မဟုတ်ဖောက်ဖျက်ချိုးဖောက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ခွင့်ပြုလို့မရပါဘူး။ သို့သော်ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာရဲ့ liabilities ကိုဖုံးလွှမ်းရန်အာမခံသည့်မူဝါဒယ်ယူနိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးကကုမ္ပဏီ၏ကုမ္ပဏီအတွင်းရေးမှူးခန့်အပ်ရန် option ရှိပါတယ်။ အဆိုပါဆောင်းပါးများအတွင်းရေးမှူးရဲ့တာဝန်ဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်။ ဆောင်းပါးများအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ပျက်ကွက်လျှင်, ထိုဒါရိုက်တာများလုပ်ငန်းတာဝန်များအားသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကတစ်ဦးတည်းသောဒါရိုက်တာအတွင်းရေးမှူးအဖြစ်ခန့်ထားခဲ့သောဖြစ်နိုင်သည်။
တိုင်း LLC ဒေသခံတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်ကိုခနျ့အပျမြားနှငျ့မှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်ရဲ့ရုံးလိပ်စာဖြစ်နိုင်သည့်ဒေသခံတစ်ဦးရုံးလိပ်စာထိန်းသိမ်းရန်ရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါနေထိုင်သူအေးဂျင့်ဒေသခံတဦးကကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာသို့မဟုတ်တစ်လိုင်စင်ရ CSP ဖြစ်ရမည်ဖြစ်စေ။ မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်ကိုခနျ့အပျဖို့လိုအပျခရန်တစ်ခုတည်းသောခြွင်းချက်အဆိုပါဂါဇီးဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုကော်မရှင်သို့မဟုတ်အသိအမှတ်ပြုစတော့ရှယ်ယာဖလှယ်မှုအပေါ်စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများကလိုင်စင်ရကုမ္ပဏီများသည်ဖြစ်ကြသည်။
• (မလိုအပ်လျှင်) subscriber များအား '' အစုရှယ်ယာများနှင့်ပထမဦးဆုံးရှယ်ယာရှင်များနှင့်ပြဿနာဝေစုလက်မှတ်များသတ်မှတ်ထားတဲ့;
• (တဦးတည်းအဖြစ်ခန့်အပ်ထားပြီးလျှင်) တစ်ဦး CSP နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစာချုပ်စီရင်လော့
ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းမှပထမဦးဆုံး 18 လအတွင်းပထမနှစ်ပတ်လည်ယေဘုယျအစည်းအဝေးပေါ်ပေါက်ရပေမည်။ အဲဒီနောက် 15 လအတွင်းနှစ်စဉ်ယေဘုယျအစည်းအဝေးပေါ်ပေါက်ရပေမည်။ အထွေထွေအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ခြင်းသူတို့၏အမျိုးအ 90% ၏တစ်ဦးကနိမ့်ဆုံးနှစ်ပတ်လည်ယေဘုယျအစည်းအဝေးလိုအပ်ချက်မဆိုစွန့်လွှတ်အတည်ပြုရပေမည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီအတွင်းရေးမှူးတစ်ဦးရှယ်ယာရှင်များအစည်းအဝေးဒါမှမဟုတ်မဲပေးခွင့်အနည်းဆုံး 10% ကိုင်ပြီးရှယ်ယာရှင်များထံမှတောငျးဆိုခကျြဖွငျ့ကျင်းပရမည်နိုင်ပါတယ်။
အစည်းအဝေးများကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုကျင်းပနိုင်ပါသည်။ ဆောင်းပါးတွေကတားမြစ်မဟုတ်လျှင်ရှယ်ယာရှင်များတယ်လီဖုန်းမှတဆင့်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။ အဆိုပါဆောင်းပါးများရှယ်ယာရှင်ပါဝင်မှုများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများပေးနိုငျသညျ။
ကုမ္ပဏီများအားလုံးအရောင်းအကိုရှင်းပြခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှန်ကန်မှုနှင့်အတူကုမ္ပဏီ၏လက်ရှိဘဏ္ဍာရေးအနေအထားဖေါ်ပြခြင်းစာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်သည်။ မှတ်တမ်းများကိုအနည်းဆုံး6နှစ်ပေါင်းဘို့စောင့်စေရမည်ဖြစ်ပြီးဘယ်နေရာမှာမဆိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။
အကောင့်သို့မဟုတ်ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်များအဘယ်သူမျှမအများပြည်သူ FILE ရှိပါတယ်။ နှစ်ပတ်လည်စာရင်းကိုင်စစ်မှန်တဲ့ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေနှင့်အမြတ်အစွန်းနှင့်ကုမ္ပဏီ၏ဆုံးရှုံးမှုကိုထင်ဟပ်ကိုပြင်ဆင်ရမည်ဖြစ်သည်။
နှစ်စဉ်စာရင်းစစ်အဖြစ်သတ်မှတ်သေးငယ်တဲ့ကုမ္ပဏီ မှလွဲ. လိုအပ်သည်:
ကုမ္ပဏီများက၎င်း၏ရှယ်ယာရှင်များ, ဒါရိုက်တာ, အတွင်းရေးမှူးနှင့်မှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်အသေးစိတ်က၎င်း၏မှတ်ပုံတင်ရုံးမှာမှတ်ပုံတင်ထားရန်လိုအပ်သည်။ တစ်ဦးအဖြစ်လျာထားသောအားဖြင့်ကျင်းပသည့်ရှယ်ယာအသေးစိတ်ဖို့မှတ်ပုံတင်အတွက်အကျိုးရှိသောပိုင်ရှင်တွေမလိုအပ်ပါ။ အဆိုပါမှတ်ပုံတင်အများပြည်သူတို့အတွက်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်ရှယ်ယာရှင်များနှင့်ဒါရိုက်တာများဖို့လက်လှမ်းဖြစ်ရမည်။
အများပြည်သူ၏အဖွဲ့ဝင်များ access များအတွက်ရည်ရွယ်ချက်ပေးခြင်းအားဖြင့်မှတ်ပုံတင်မှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုတောင်းခံနိုင်ပြီးငြင်းဆန်ခဲ့သည်ဆိုပါကဆုံးဖြတ်မှတက်တရားရုံးမှဖြစ်လိမ့်မည်သည့် access ကိုလိုအပ်တစ်ခုအမိန့်များအတွက်ဂါဇီးတရားရုံးများဖို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။